Ogwurugwu Thermal ọgbara ọhụrụ China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ogwurugwu Thermal ọgbara ọhụrụ - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 6 Ngwaahịa maka Ogwurugwu Thermal ọgbara ọhụrụ)
Nhazi ọhụrụ Uwe aka na-ekpo ọkụ n'oge oyi
Nhazi ọhụrụ Uwe aka na-ekpo ọkụ n'oge oyi Atụmatụ: 1.Ọdịmma ihe onwunwe na ndụ ogologo oge 2.Nkeghari akuku nke oma, ikpo oku ngwa ngwa, ichekwa ike. 3.Temperature Control Nhọrọ: Ịnọgide Heating 2-3 Awa - Ọkara Heating 3-5 Awa 4.Weatherproof 3.7V / 4500 mAh Lithium Battery-eme ka ọ dị iji na Snow ma ọ bụ Rain,...
Nchagharị ọkụ ọkụ kachasị ọhụrụ
ihe kachasị ọhụrụ na-ekpo ọkụ ọkụ 1. Nke a bụ otu ụzọ kachasị kpochapụ ọkụ ọkụ, ihe kpatara ya bụ iji zere aka iji gwọọ ma ọ bụ icebite na ugwu frigid na oyi. 2. Na-agba ume, na-ebugharị ma ọ dịghị adaba. 3. Batrị buru ibu dịkarịa ala ma zọpụta ọkụ eletrik. 4. Nkịtị dị n'elu bụ maka mmiri na-ekpuchi mmiri na...
Ogwurugwu Thermal ọgbara ọhụrụ Ogwurugwu Na-agba Ọhịa Ọkụ Egwuregwu Ọhụụ Egwuregwu Na-ekpo ọkụ Maka Ọkụ Ọkụ Egwuregwu Ụlọ Ịgba Ọkụ Defogger Egwuregwu kpochapu ọkụ Egwuregwu Okpomọkụ Batrị Egwuregwu Electrotop Ụlọ ọrụ